ट्रम्प र किमलाई सिंगापुर शिखरवार्तामा इतिहास रच्ने मौका - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ट्रम्प र किमलाई सिंगापुर शिखरवार्तामा इतिहास रच्ने मौका
केही महिनाअघि मात्र एकअर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन ऐतिहासिक शिखरवार्ताका लागि सिंगापुर पुगेका छन्। तर के यो वार्ता सफल होला? ६ महिनाअघि कोरियाली प्रायद्वीपमा आज हो कि भोलि लडाईं सुरु होला भन्ने त्रास थियो। केही साताअघि मात्रै ट्रम्पले सिंगापुर वार्ता रद्द भएको घोषणा गरेका थिए। तर अन्ततः दुवै देश एउटै टेबलमा बस्न राजी भएका छन्।
आइतबार किम जोङ उन एयर चाइनाको चार्टड विमानबाट सिंगापुरको चांगी विमानस्थलमा ओर्लिए भने ट्रम्प केही घण्टापछि साँझमा एयर फोर्स वानमार्फत् पाया लेबर हवाइ अड्डामा अवतिरत भए। सिंगापुरमा अहिले विश्वभरका पत्रकारहरुको भीड लागेको छ। अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाबाट त्यहाँ सबैभन्दा बढी पत्रकार पुगेका छन्। यो शिखरवार्ताको समाचार सम्प्रेषणका लागि २५ सय पत्रकारले नाम दर्ता गराएका छन्। यो वार्तामा किम र ट्रम्पको मुस्कान, शारीरिक हाउभाउसहित सम्पूर्ण गतिविधिको विविध अर्थ निकालिनेछ।
किम सेन्ट रेजिस होटलमा बसेका छन् भने त्यसबाट करिब ८ सय मिटरको दूरीमा रहेको सांग्रिला होटलमा ट्रम्प बसेका छन्। यी नेताको सुरक्षामा सिंगापुर प्रहरीमा रहेका गोर्खाहरु खटिएका छन्।
सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली सिङ लुङसँग ट्रम्प
उत्तर कोरियाली टोलीमा नेता किम, उनकी बहिनी किम यो जोङ, विदेशमन्त्री री योङ हो, रक्षामन्त्री ङ क्वाङ चोल र किम योङ चोल रहेका छन्। अमेरिकी टोलीमा राष्ट्रपति ट्रम्प, विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ, फिलिपिन्सका लागि राजदूत, सुङ किम, चिफ अफ स्टाफ, जोन केली, डेपुटी चिफ अफ स्टाफ, जो ह्यागिन, प्रेस सेक्रेटरी सारा स्यान्डर्स, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका एसिया निर्देशक म्याथ्यु पोटिंगर संलग्न छन्।
ट्रम्प र किमबीचको वार्ता सिंगापुरको सेन्टोसा टापुस्थित क्यापेला होटलमा हुँदैछ। स्थानीय समयअनुसार बिहान ९ बजे वार्ता सुरु हुने बताइएको छ। वार्ताबारे अन्य विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। यद्यपि एसोसियट प्रेसले जनाएअनुसार सल्लाहकार बाहेक नै किम र ट्रम्पबीच २ घण्टा ‘वान अन वान’ वार्ता हुनेछ। उनीहरुसँग दोभाषे मात्र हुनेछन्। त्यसपछि मात्रै टोलीका अन्य सदस्य वार्तामा सहभागी हुनेछन्।
धेरैको अपेक्षाविपरीत ट्रम्प र किमबीच गल्फ खेल भने हुनेछैन।
कोरियाली प्रायद्वीको आणविक निशस्त्रीकरण यो वार्ताको सबैभन्दा मुख्य एजेन्डा हो। तर एकैचोटी यो लक्ष्य पूरा हुने छैन। उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्मयले ‘शान्ति कायम गर्ने स्थायी र भरपर्दो संयत्र’ निर्माण गर्नु यो वार्ताको एजेन्डा भको बताएको छ।
त्यसबाहेक कोरियाली युद्धलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्ने, उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनसक्छन्।
नतिजा के होला?
संसारभर यो शिखरवार्ताबारे चासो छ। ट्रम्पले शिखरवार्ताका लागि आफूले कुनै तयारी नगरीकनै पूर्ण तयार रहेको बताइसकेका छन्। उनले पटकपटक यो वार्ता सोचेजस्तै सफल नहुने संकेत गरिसकेका छन्। यद्यपि सिंगापुर पुगेपछि उनले वार्ताबारे सकारात्मक संकेत गरेका छन्।
यसअघि नै पान्मुन्जोम, अमेरिका र सिंगापुरमा दुवै देशबीच विभिन्न तहमा अनेकौँ चरणका वार्ता भइसकेका छन्। सिंगापुर वार्ता राम्रो भए किमलाई ह्वाइट हाउस निम्त्याउन सक्ने पनि ट्रम्पले बताएका छन्। तर यो वार्ता सफल हुन भने निकै मुस्किल छ। ट्रम्पले एकअर्कालाई नजिकबाट चिन्ने मौका यो शिखरवार्ताले दिने बताएका छन्।
वार्तामा उत्तर कोरियाको आणविक हतियार अन्त्य हुनुपर्ने अमेरिकाको एक मात्र चाहना अभिव्यक्त हुनेछ। किम चाहन्छन्, उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दी समाप्त होस् र आर्थिक सहायता प्राप्त होस्।
पुस्तौँको कठिन संघर्षपछि आणविक हतियारको विकासमा हात पारेको सफलता उत्तर कोरिया सस्तैमा गुमाउन चाहँदैन। यस्तोमा मोलमोलाइ र छलफलको कठिन प्रक्रिया सुरु हुन भने सक्छ। यसका लागि यी दुई देशबीचको विश्वास निकै महत्वपूर्ण हुनजान्छ। त्यसैले यो शिखरवार्ताको सफलता आगामी समयमा कोरियाली मुद्दाले लिने मार्गबाट मात्र तय गर्न सकिने छ।
किमलाई स्वागत गर्दै सिंगापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालकृष्णन
ट्रम्प र किमलाई इतिहास बनाउने मौका?
केही वर्षअघिसम्म ट्रम्प राजनीतिमा आउने कुनै संकेत थिएन। उनी सबैलाई चकित तुल्याउँदै राष्ट्रपतिमा विजयी बने। उत्तर कोरिया पनि सँधैका लागि विश्व मञ्चमा ‘दुष्ट राष्ट्र’ का रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ। यसबेला दुवै देशका नेता दबाबमा छन्। अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिमा मात्र नभइ दशकौँदेखि सहकार्य गरेका मित्र राष्ट्रहरुसँग पनि ट्रम्पको किचलो बढेको छ।
उता किम जोङ उन आजको समयमा पनि नाकाबन्दीका कारण गरिबीमा पिल्सिरहेको उत्तर कोरियाको कारण उस्तै दबाबमा छन्। यस्तोमा यी दुवै असम्भव जस्ता लाग्ने नेताहरुको हातमा इतिहास बनाउने मौका आइपरेको छ। कोरियाली द्वन्द्व समाधान भएर त्यहाँ शान्ति र समृद्धिको जग बसे किम र ट्रम्प दुवैका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि यो सफलताको अभूतपूर्व कथा हुनेछ। एजेन्सी